Mashruuca CIP ee Shaqo-qorista Shaqaalaha Rayidka Puntland & Musuq-maasuqa Hadheeyey.[Warbixin] | Goojacade
Home War Mashruuca CIP ee Shaqo-qorista Shaqaalaha Rayidka Puntland & Musuq-maasuqa Hadheeyey.
Mashruuca CIP ee Shaqo-qorista Shaqaalaha Rayidka Puntland & Musuq-maasuqa Hadheeyey.[Warbixin]
“Barmaanjika CAPACITY INJECTION PROJECT ee Baanka Adduunku maalgelinaayo qaybta shaqooyinka oo uu hadheeyey musuqmaasuq lagu kala iibsanayo shaqooyinka , halka hablaha qaarkood ku xidheen in ay helida shaqada ku bedeshaan GALMO” HORDHAC Musuqa (corruption), eexda, qaraabo-kiilka (Nepotism) iyo dhaca (Embezzlement) waa waxa la hadhay Soomaaliya, waana midda keentey in shantii sano ee u danbeysey Soomaaliya kaalinta kowaad ka gasho isu barbardhigga heerka musuqmaasuqa ee dowladaha aduunka. Musuq-maasuqu waxa uu dhaxalsiiyaa dalka fakhri, jahli, colaad iyo horumar la’aan. Doorashadii Puntland 2014, Madaxweynihii ku soo baxay Cabdiweli Cali Gaas waxaa loo soo dhaweeyey si aad u weyn, waxa uu horey u soo noqdey Raysalwasaare Soomaaliyeed, waxa uu muddo dheer ku nolaa dalalka hoggaamiya dimoqraadiyadda iyo nidaamka daah-furnaanta. Cabdiweli Cali Gaas ayaa ballan ku qaadey in uu wax ka qabanayo afar arrimood oo kala ah:
Isbeddelka sugidda amniga
Dib u habeynta sinaanta caddaaladda
Dib u habeynta shaqaaalaha rayidka ah.
Dib u habenyta dhaqaalaha
Marka laga yimaado Amniga iyo Caddaaladda.
Labada qodob ee kale ayaa la aaminsan yahay in Puntland nasiib u heshey nidaam ay wax uga qaban karto kadib markii Baanka Adduunku uu heshiis la galay Soomaaliya wax looga qabanaayo hormarinta, tayeynta iyo kobcinta dhaqaalaha ee shaqaalaha rayidka ah barnaamijkaas oo lagu magacaabo CAPACITY INJECTION PROJECT, waxaana uu soconayaa muddo shan sano ah 2015-2019. Barnaamijka CIP ee Baanka Adduunku taageerayo ayaa ah in kor loo qaado tayada shaqaalaha Puntland, in lagu dhiso shuruucda shaqaaleysiinta oo Puntland loo carbiyo nidaamka shaqaaleysiinta tartanka iyo aqoonta ku dhisan. Barnaamijka shaqo qorista ee Baanka Adduunku tageerayo ayaa la gaadhsiiyey inta badan wasaaradaha Puntland iyo weliba Xafiiska Madaxweynaha iyo Komishanka Shaqaalaha Rayidka. Shaqaalaha ku yimaada nidaamkan ayaan weligood hoos joogeyn Baanka Adduunka waxaase qorshuhu yahay sidaan sheegney mid kaalmo ah oo Puntland wax lagu baraayo si shaqo kastaa uu u joogo qof u qalma. MUSUQA GUDDOOMIYAHA KOMISHANKA SHAQAALAHA RAYIDKA
Mustafe Saciid Shabac Guddoomiyaha Koomishanka Shaqaalaha Rayidka ee Puntland
Bishii October 2015 ayaa si rasmi ah daaha looga rogey shaqooyinka CIP ee Baanka Adduunku kaabayo kaas oo lagu tayeynayo awoodda shaqaalaha Puntland dibna loogu tartamaayo shaqooyin muddo shan sano ah mushaharkooda Baanka Adduunku bixinaayo, isla bishii December 2015 waxaa bilowdey Xayeysiinta shaqooyin gaaraya 60 jago oo loo qaybiyey, Xafiiska Madaxweynaha, Komishanka shaqaalaha rayidka ee Puntland, iyo wasaaradaha Maaliyadda, Qorsheynta, Shaqada iyo shaqaalaha, Beeraha, Xannaanada Xoolaha Kaluumeysiga iyo weliba Baanka Dhexe ee Puntland. (EEG LIFAAQA) Lixdanka jago ee la soo dhejiyey bishii Disember 2015, ayaa afar kamid ah waxaa loogu tartamaayey Xafiiska shaqo qorista u qaabilsanaa Puntland ee Puntland Civil Service Commission oo uu agaasimaha ka yahay Mustafe Saciid Shabac, Xafiiska Madaxweynaha ama Villa Puntland ayaa iyadana loo soo dhejiyey lix kamid ah 60-kii jago ee u horeeyey ee Baanka Adduunku maal-geliyey, Shaqooyinka soo haray ee kale waxaa loo qaybiyey qaar kamid ah wasaaradaha Puntland iyo Baanka dhexe ee Puntland. Awoodda shaqo qorista waxaa iska lahayd Puntland, laakiin Baanka Adduunka ayaa dalabadey dejiyeyna nidaamka shaqo qorista la doonaayo in ay barto oo aha:
Qiimeyn iyo kala saarid (Screening)
Imtixaan laga qaado kuwa ku soo baxa qiimeynta
Waraysi fool-ka-fool ah kuwa ku soo baxa Imtixaanka
Qaadista Imtixanada waxaa ku baxay dhaqaale aad u badan
SUUQA KALA IIBSIGA SHAQADA Lixdanka shaqo ee la soo dhajiyey waxaa ka yimid codsiyo ka badan 4000 oo dalab shaqo, taas oo muujineysa heerka shaqo la’aanta ee Puntland, dadka soo dalbadey waxay ahaayeen badankood ardeydii wax ku baratey dalka gudihiisa iyo kuwo wax ku soo bartey dalka dibadiisaba, sidoo kale waxaa ku jirey shaqaalihii wasaaradaha qaarkood waxaana soo jiitey shuruudaha la sheegay in shaqo qoristan lagu xidhay oo ah mid ku dhacaysa tartan iyo hufnaan caddaalad ku dhisan, sida uu madaxweynaha Puntland ballan qaadey (xigasho codka kore) Soomaalidu waxay tidhaahdaa “Bahal ceedhiin ma daayo, nin-na caadadiis ma baajo”, Dhamaan shaqooyinkii ku qornaa Xafiiska Madaxeynaha ayaa loo xalaaleeyey shaqaalihi hore, waxaana kamid ahaa qaar aan imtixaanba gelin oo Madaxweynuhu saxiixey ka hor inta aan imtixaankaba la qaadin, waxaana taasi mugdi gelisey waxa laga filaayey shaqooyinka kale ee ay soo dalbadeen dhalintii dalka wax u soo baratey ee doonayey in ay helaan caddaalad, waxaana meesha ka baxdey odhaahdii Madaxweynaha ee ahayd “Xafiiskayga ayaa tusaale u noqon dona caddaaladda shaqooyinkan” (Xigasho codka kore). SHABAC MASHIINKA MUSUQA Waxaan dabagal ku hayney, muddo lix bilood ah barnaamijka shaqo qorista ee Puntland ee CIP ee hoostaga xafiiska Komishanka Shaqaalaha Rayidka, waxaan kulamo la qaadaney qaadh kamid ah dadkii ku guuleystey shaqooyinka iyo kuwo kale oo aan nasiib u helin in ay ka qaybqaataan tartanka musuqmaasuqa ee Puntland, natiijada soo baxdey ayaa noqotey mid qofkasta ku rideysa ‘yaaab’ iyo niyad-jab. Agaasimaha Koomishanka Shaqaalaha Rayidka Mustaf Saciid Shabac ayaa la soo baxay dhaqan ku cusub Puntland kadib markii uu meel iska dhigey in uu u hoggaansamo nidaamka shaqo qorista ee Baanka Adduunku (World Bank) doonaayey in la raaco. Nidaamka cusub ee Shabac u dejiyey ayaa ahayd:
– In lacag lagu iibsado shaqooyinka.
– Hablaha qaarkood oo uu ka dalbadey Galmo shaqo helid darteed (Sexual favors for employment).
– In Shaqo doonka qarkood lagula heshiiyo in ay saami (%) ka bixiyaan mushaharkooda muddo sanad ah (slave wages).
– In shakhsi awood leh kaala hadlo Mustafe Shabac sida Madaxweynaha.
Muddadii aan baadhitaanka wedney ayaan helney in Mustafe Shabac uu lacag ka qaatey dad ku dhaw 30 qof, waxaana jagooyinka shaqada uu ku iibsanaayey 1200-3000$, halkii midba. Baadhitaanka waxaan ku ogaaney arrimo fadeexad ah oo aan horey u dhicin, hablaha uu muqaalkooda ka helo Shabac ayuu u diraayey fariimo gaar ah oo uu ka dalabanayo in ay la sameeyaan Galmo si uu ugu fududeeyo shaqada. Mashiinka musuqa ee Mustafe Shabac ayaa la yimid niyad-jab xooggan oo soo gaarey dhalinyarada shaqa-doonka ah. Muraayad waxay fursad u heshay in ay wareysato laba qof oo laga codsaday in ay lacag bixiyaan si ay u helaan boosaska. Labadan dhalinyaro ayaa la kulmay Gudoomiyaha Koomishinka si ay ogaadaan habka xulista shaqaalaha. Maxamed Cali Saciid (magaciisa dhabta ah ma aha) waxa uu noo sheegay in Gudoomiye Shabac ku yiri “go’aanka ugu dambeeya aniga ayaa iska leh, hadii aad dooneyso waan ku siin karaa hadaan is af fahano”, marka uu waydiiyay Maxamed waxa uu baahan yahay in uu helo booska ayaa Mustafe ugu jawaabay “waxaan caadi ahaan ka qaadaa dadka shan kun oo dollar ($5,000), laakiin adiga waan ku dhaqaaleynayaa oo kalabadh ($2,500) ayaan kuugu dhameynayaa”. Sidoo kale inan kale Jaamac Cismaan Muuse (Magaciisa dhabta ah ma aha), ayaa isna noo sheegay in wada hadal dheer kadib uu Shabac ka codsaday sadex kun oo doolar ($3,000) oo uu yiri “booska hadii laguu qaato, waligaa ayaad joogeysaa marka hadaad rabto labo bilood musharkood kaliya ii hor mari”. Waxaa Muraayad u suura gashay in ay hesho macluumaad badan oo xaqiijinaya musuqa baahsan iyo dhaqanka halkan ku xusan. Daabacaada macluumaadka dheeraadka ah waxaan uga gaabsanay si aan u ilaalino dadka macluumaadkaas nala wadaagay. QAAB DHISMEEDKA KOMISHANKA SHAQAALAHA RAYIDKA Hay’adda Komishanka Shaqaalaha rayidka ah waxaa magacaaba Madaxweynaha Puntland, sida u qabo sharciga Komishankan ayaa la doonaayey in ay iska dhex doortaan Guddoomiyaha Komishanka Shaqaalaha Rayidka ah taas oo aan dhicin waxaana Mustafe Saciid Shabac soo magacaabey Madaxweynaha Puntland. Sida aan baadhitaanka ku helney Mustafe Saciid Shabbac ayaan wax wada tashi ah la sameyn Koomishanka qaybihiisa kale xitaa ku xigeenkiisa, waxaana Koomishankaku ka kooban yahay 5 qof. WAA KUMA MUSTAFE SHABAC? Mustafe Shabac ma ahan shakhsi si weyn looga yaqaan gudaha Puntland, muddo dheer waxa uu ku noolaa dalka Kenya, waxa uu kamid ahaa koox ka ganacsan jirtey maandooriyaasha, taas oo sababtey in muddo ku badan 10 sanadood uu ku xidhnaa dalka Hindiya kadib markii lagu qabtey isaga wada daroogo, waxa uu Puntland u soo wareegay muddo aan fogeyn. TALO SOO JEEDIN Puntland waxaa soo marey fursad aad u weyn oo dib u habeyn loogu sameyn karey nidaamka shaqo qorista si shaqo kastaa u hesho qofkii ku haboonaa, haddaba si loo badbaadiyo nidaamkan CIP waxaa Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas la gudboon in uu qaado tallaabo deg-deg ah oo uu ku badbaadinaayo sumcadiisa iyo dhaxalka uu dadkaan uga tegaayo maalinta berri ah, waxaa laga doonayaa Madaxweynaha in uu sameeyo baadhitaan deg-deg ah taas oo caalamka u muujin karta in aanu qayb ka ahayn fadeexaddan. Baarlamaanka Puntland ayaa looga fadhiyaa in ay u yeedhaan dhamaan Koomishanka Shaqaalaha Rayidka oo ay wax ka weydiiyaaan musuqmaasuqa shaqooyinkii loo tartami lahaa ee suuqa lagu kala iibsadey, Xildhibaanada golaha Wakiilada Puntland iyaga ayaa wakiil ka ah dhamaan dhalinyaradii shahaadooyinka wadatey ee uu reebay Mashiinka musuqa ee Mustafe Shabac. Haddii maamulka Puntland uu tallaabo qaadi waayo waxay saameyn ku yeelan doontaa dhamaan shaqooyinka hadhay ee Baanka Adduunku maal geliyey ee Mustafe Shabbac iyo kuwa la mid aha u malabsanayaan in ay ku noqdaan ‘Magafayaasha’ cusub ee aan lahayn jixin-jix, khajil iyo xishod midna. Xigasho:-www.Muraayad.com Goojacade.com Bosaso-Puntland somaliya Email:-Goojacadewebsite@gmail.com]]>
Previous articleMadaxda ugu sareysa dowlada Soomaaliya oo Digniin culus loo jeediyay
Next articleAkhriso Heshiis ay wada gaareen Wasaarada Arimaha Gudaha iyo Maamulka Galmudug